New World Computer Table | Buy online | SHOP.COM.MM
New World Computer Table
Melamine ကြိတ်သား ဖြစ်သည့်အတွက် မှိုမတက်ခြင်း။
အကျစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက် ရေစိုပါက ပွသွားခြင်း မရှိခြင်း။
ကွန်ပြူတာ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူအောင် ကြိုးလိုင်းဖောက်ထားပေးခြင်း။
W1200 x D700 x H750cm
Delivery Delivery until: 2018 Jul 9
ဒီကွန်ပျူတာစားပွဲလေးကိုတော်တော်သဘောကျပါတယ်။ Desktop ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ကွက်တိတင်လို့ရပါတယ်။ အံဆွဲပါလို့ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်း သိမ်းလို့ရပါသေးတယ်။ Read more Hide
Chic and understated, the computing desk delivers convenient practicality and storage with attractive Shaker styling. Featuring an oak-effect finish , it looks great with both traditional and contemporary interiors. The rectangular surface is suitable for any size monitor and the desk also has3drawers for storage, large enough to hold A4 files. The size of this computer table is W1200 x D700 x H750cm.You can easily clean it with wet cloth.
Specifications of Computer Table